- Qaybta 2
Abuur baakadaha qurxinta ee kuugu habboon
Sidee loo doortaa cadar taariikhi ah?
Cadarku wuxuu u keenaa dumarka soojiidasho u gaar ah noolaha badan, wuxuuna si fiican u iftiimin karaa shakhsiyadda iyo dhadhanka dumarka. Si aad u doorato cadarku waa inaad doorato dareenkaaga urta. Waxay muujin kartaa waxyaabo badan oo naftaada ku saabsan. Markaad shukaansato, waa inaad doorataa cadar ku habboon shakhsiyaddaada oo kaa dhigeysa inaad dareento kalsooni ...
Aaway meesha ugu fiican ee lagu buufiyo cadarka?
Aaway meesha ugu fiican ee lagu buufiyo cadarka? Aaway meesha ugu fiican ee lagu buufiyo cadarka? Dadka bilaaba isticmaalka cadarka waxaa laga yaabaa inaysan aqoon badan u lahayn barafuunka. Ma ogtahay meesha buufinta cadarku ugu qurux badan tahay? Haweeney kasta, waa inay lahaataa dhalo barafuun iyada iska leh. Waad ...
Isku darka udugga nolol maalmeedka
Soo iibso farabadan ubaxyo isla markaana fur dhalo udugga ah Isla markiiba waxay kor u qaadi kartaa booska illaa heer dareen leh Haddii cadarku meteli karo neefta qofka. Sidaas udugga waa astaan ​​u gaar ah guriga Haddii aad ku tababbarto udugga ama aad si fudud isku dayayso inaad gurigaaga u cusbooneysiiso, adigoo isticmaalaya caws d ...
﻿Ka Badbaadi Nafteena COVID-19
Ka Badbaadi Nafteena Kahortaga COVID-19 2020 sanad uma fiicna dhamaan dadka aduunka ku nool sababta oo ah fayraska COVID-19 corona. Dad badan ayaa ku waayey qoysaskooda. Waad ku mahadsan tahay dowladda Shiinaha, xaaladdu si tartiib tartiib ah ayey gacanta ugu haysaa. Si kastaba ha noqotee, sida jiilaalku yimaado, fayraska ayaa halkan ku soo baxa ama ...
Sida dib loogu isticmaalo dhalada duugga ah ee ciddiyaha
Ma waxaad tahay qof jecel ciddiyaha? Waxaan, waxaan nahay oo dhan. Sideed u maareysaa dhalo duug ah oo ciddiyaha la mariyo? Oo sidee wax u qabataa markaad gaarto dhamaadka dhalada dhalada ciddiyaha? Tuur ama iska daa? Fadlan hakin intaadan tuurin. Weli waxaa jira waxyaabo badan oo aad qaban karto ...
Dib u isticmaal dhalooyinka cadarkaaga nolol maalmeedka
Waxaan aaminsanahay in qof walba uu jecel yahay udgoonka wanaagsan. Laakiin cadarka wanaagsan ee udgoonkiisa joogtada ahi waa qaali. Markaan isticmaalno iyaga, iska tuur ama iska dhig naftaada. Miyaan dib u isticmaalnaa? Haa, dabcan waan awoodnaa. Waa kuwan fikrado DIY ah si aad dib ugu isticmaasho dhalooyinkaaga cadarka tixraac ahaan ...
Fikradda naqshadeynta baakadaha cadarka
Intii lagu gudajiray Renaissance, soosaarka cadarka si dhaqso leh ayuu ugu koray Yurub sababo la xiriira dib u helitaankii caanaha duugga ee hore. Xarunta dhexe ee Renaissance, sida Venice iyo Florence, sidoo kale waa xarunta udgoon sameynta. Qoyska Medici waa hogaamiyaha warshadaha cadarka. Catherine, xubin ka tirsan ...
Dhalada caaga ah: waa kuwee qaybaha ay ka muuqato shakhsiyadda baakadaha midabku ka muuqdo
(1) Dhammaan noocyada badeecooyinka waxay leeyihiin astaamo gaar ah. Wax soo saarka dawooyinka iyo alaabada madadaalada, cuntada iyo qalabka qalabka, qurxinta iyo agabka dhaqanka iyo waxbarashada waxay leeyihiin faraq aad u weyn. Noocyo isku mid ah ayaa sidoo kale lagu kala duwanaan karaa. Tusaale ahaan, waxaa jira d ...
Furaha lagu xidhayo dhalada saliida lagama maarmaanka ah waa daboolka
In geeddi-socodka dhalada saliidda lagama maarmaanka u noqota mid caan ka ah waddanka oo dhan, waxay umuuqataa in dadku fiiro gaar ah u yeeshaan dhalada saliidda muhiimka ah. Quruxda dhalada saliida waxay umuuqataa inay go’aamineyso qiimaha saliida lama huraanka ah ilaa xad aad u weyn, taas oo ka dhigeysa shirkado badan oo saliida soo saarta inay qaataan pr ...
Muujinta shakhsi ahaaneed ee baakadaha la isku qurxiyo
(1) Baakadaha la isku qurxiyo waa duni midabbo badan leh. Noocyo kala duwan oo la isku qurxiyo ayaa dooran doona midabyo habboon oo ku habboon astaamaha u gaarka ah. Caddaan, cagaar, buluug iyo casaan waa kuwa ugu caansan, Midab, dahab iyo madow wuxuu astaan ​​u yahay qarsoodiga iyo karaamada, kaas oo loo isticmaali karo fasal sare iyo in ka badan ...
<< <Hore 123 Xiga> >> Bogga 2/3